Tuesday, February 02, 2021 ADMIN No comments Posted in:
ပြည်သူတွေ သတိရှိကြပါ လုပ်ကြံဖန်တီး ဆန္ဒပြပွဲများနဲ့ ရိုက်နှက်ပစ်ခတ်မှုအထိရှိလာနိုင်ပီး လူသေတဲ့အထိ ဖန်တီးပါလိမ့်မယ်
ဒါမှလဲနိုင်ငံတကာကို ပြည်တွင်း ဆူပူမှုဖြစ်ကြောင်းသက်သေ ပြလို့ရမှာပါ
၁၀၀၀၀ စားတွေ ၅၀၀၀ စားတွေ သတိရှိကြပါ ငွေရလိုမှုတခုထဲမကြည့်ပဲနဲ့ မိမိတို့အသက်ဘေးကို ဂရုစိုက်ကြပါ
Monday, February 01, 2021 ADMIN No comments Posted in:
စဈတပျက ယနေ့ ၁ ၊ ၂ ၊ ၂၀၂၁ မနကျပိုငျးမှာ လူထုခေါငျးဆောငျ ( နိုငျငံတျော အတိုငျပငျခံ ) ဒေါအောငျဆနျးဆုကွညျ နှငျ့တကှ အစိုးရ ဆိုငျရာ ဝနျကွီးမြားကို ချေါဆောငျထိနျးသိမျး ခဲ့ပါတယျ။ ဖှံ့ဖွိုးဆဲ ဒီမိုကရစေီစနဈနှငျ့ တိုငျးပွညျ၏အနာဂတျအတှကျ ကြှနျတျောတို့မွနျမာ နိုငျငံ အ နေ နဲ့ အားလုံးရဲ့ အကူအညီကို လိုအပျပါတယျ။
Kami mendesak perhatian mendesak Anda karena para pemimpin kami yang terpilih secara demokratis termasuk Penasihat Negara Aung San Suu Kyi, Presiden Win Myint bersama dengan pejabat senior pemerintah, dan anggota parlemen yang terpilih sekarang telah ditahan oleh militer. Mohon bantu negara kami dengan menghentikan kudeta militer ini seperti yang terjadi sekarang di Myanmar (Burma).
Partai Aung San Suu Kyi menang telak dalam pemilihan baru-baru ini dan parlemen baru akan dimulai dalam beberapa jam ke depan.
เราขอให้คุณให้ความสนใจอย่างเร่งด่วนในฐานะผู้นำที่มาจากการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยของเราซึ่งรวมถึงที่ปรึกษาแห่งรัฐอองซานซูจีประธานาธิบดีวินมินต์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลและสมาชิกรัฐสภาที่มาจากการเลือกตั้งได้ถูกควบคุมตัวโดยทหารแล้ว โปรดช่วยประเทศของเราด้วยการหยุดการรัฐประหารครั้งนี้ซึ่งกำลังเกิดขึ้นในเมียนมาร์ (พม่า)
Aung San Suu Kyi의 정당은 최근 선거에서 압도적 인 승리를 거두었으며 새 의회는 다음 몇 시간 안에 시작될 예정입니다.
Hinihimok namin ang iyong kagyat na pansin dahil ang aming mga piniling demokratikong pinuno kabilang ang State Counsellor Aung San Suu Kyi, Pangulong Win Myint kasama ang mga nakatatandang opisyal ng gobyerno, at ang mga nahalal na miyembro ng parlyamento ay nakakulong na ngayon ng militar. Mangyaring pinapayuhan na tulungan ang aming bansa sa pamamagitan ng pagtigil sa coup ng militar na ito dahil nangyayari ito ngayon sa Myanmar (Burma).
Ang partido ni Aung San Suu Kyi ay nanalo ng isang malaking tagumpay sa nagdaang halalan at ang bagong parlyamento ay dahil sa magsisimula sa mga susunod na oras.
昂山素季（Aung San Suu Kyi）的政党在最近的选举中赢得压倒性胜利，新议会定于未来几个小时内开始。
#Reject #the #Military !!!
ပြည်သူအများ သတိဝီရိယ ထားသွားလာကြပါရန်
အင်တာနက် ပြတ်တောက်ပါက ဆက်သွယ်အသုံးပြုရန်
Bridgefy ဟုခေါ်သော application ကို အသုံးပြုနိုင်ရန်
Monday, October 22, 2018 ADMIN No comments Posted in:
Saturday, September 26, 2015 ဒီမိုဝေယံ No comments Posted in: ဒေါက်တာလှိုင်မြင့် ဆောင်းပါးများ
ဘဂါင်္လီ လှေစီးဒုက္ခသည်တွေ အရေး ဖြေရှင်းမှုမှာ အစိုးရ၏ အားနည်းချက်များ။ (ဆောင်းပါးရှင် ဒေါက်တာလှိုင်မြင့်)
Wednesday, May 20, 2015 ဒီမိုဝေယံ2comments Posted in: ဒေါက်တာလှိုင်မြင့် ဆောင်းပါးများ
ဆရာဒေါက်တာလှိုင်မြင့်ရဲ့ အင်မတန်ကောင်းမွန်တဲ့ သုံးသပ်ချက်
စစ်ဗိုလ်တွေဟာ ကိုယ်ကျိုးရှာချင်လို့ အာဏာသိမ်းတယ်လို့ ပြောရင် ငြင်းချင်ကြမယ်။ မခံနိုင်ကြဘူး။ ဘယ်ဗိုလ်ချုပ်မှ ကိုယ်ကျိုးမရှာထားဖူးတိုပြီး ငြင်းရဲသလဲ။ စိန်ခေါ်တာကို လက်ခံရဲသူရှိလား။
ပိုဆိုးတာက အဲဒီကိုယ်ကျိုးရှာတဲ့ နေရာမှာ ကိုယ်စီးနေတဲ့ လေယာဉ်ရဲ့ငွေနည်းနည်းလေးသာ ရပေမည့် ဝက်အူသေးသေးလေးကို ဖြုတ်ရောင်စားတဲ့သူတွေ။ အဲဒီဝက်အူ သေးသေးလေးက ဈေးသာ မရပေမည့် ပန်ကာကို ထိန်းထားတဲ့ ဝက်အူလေး ဖြစ်နေရင်တောင် ဖြုတ်ရောင်းတဲ့ လူစားတွေ။
ဗိုလ်မျိုးညွှန့်ပါးစပ်ကတော့ တဖွဖွ။ ဒေါ်စုက အင်္ဂလိပ်နဲ့ အိမ်ထောင်ပြုထားလို့မြေမြိုလို့ လူမျိုးမပျောက်ဘူး.. လူမျိုးမြိုမှ လူမျိုးပျောက်မယ် တဖွဖွ။ ပြီးသူတို့ ကိုယ်တိုင် ဒီဘင်္ဂါလီတွေကိုလာဘ် ငွေယူလက်ခံခဲ့လို့တနစ်တခြားပိုပိုများလာတယ်။
ကျောက်နီမော် မုဒိန်းလူသတ်မှုမှာ အခုဒေါ်စုကို နိုင်ငံရေး အကျပ်အတည်းထဲ တွန်းပို့ချင်တော့ ဒေါ်စုက မြန်မာဖက်ကပါရင် ဘင်္ဂါလီဂျီဟတ်ကို ဖွင့်ပေးပြီး လာရှင်းခိုင်းမယ်။ ရိုဟင်ဂျာဖက်က ပါရင် နိုင်ငံရေးအရ ကိုယ်လည်ပင်း ကိုယ်ကြိုးတပ်မိလျက်သား.. DILEMMA ။ စစ်တုရင် စကားနဲ့ ဆို အပိုင်ခွချက်ဘဲ။ ဒေါ်စုက တစက်မှ-မဟတော့ ပြဿနာက အမှိုက်မီးကနေ ပြဿဒ်မီးစွဲတော့တာ။ ကိုယ့်ရှုးကိုယ်ပတ်။ ခုတော့ မရှင်းတတ်ကြ။ အရေးထဲ မာနက ကြီးကြီး ငါတို့လာက် မသိမတတ်။
ဒေါ်စုကိုပြောတော့ အင်္ဂလိပ်လက်တံတဲ့။ အခုသူတို့ က အမေရိကန် ပွဲစားကို ပုံအပ်ရတယ်လို့။ လုပ်လိုက်ရင် တလွှဲချည်းဘဲ။ သမ္မတလစာက တလ သိန်း ၅၀ (ဒေါ်လာ ၅၀၀၀)။ သမ္မတဘေးက ဝန်ကြိးတွေ( ၆ ဦး) ရဲ့ လစာက တဦး၃၀ x ၆ = သိန်း၁၈၀။ ဒုဝံတွေ ၊ မပါသေး။။ အကြံပေးတွေငှားထားတာ ဟုတ်မဟုတ်တော့မသိ တဦးကို တလ ဒေါ်လာ ၈၀၀၀ ကနေ ၁၀၀၀၀-။ သိန်း၁၀၀ ဝန်းကျင်။ သမ္မတထက်တောင် ဈေးကြီးနေသေး။
ကနေ့ဘင်္ဂါလီလှေစီး ဒုက္ခသည် ပြဿနာပေါ်လာတယ်။ တဖက်က ဟိုလိုပြောလာလျင် ဒီလိုလှဲ့ ပြော။ မိုးကြိုးပစ်တာ ထန်းလက်နဲ့ ကာသလိုဖြစ်နေတယ်။ ထိထိရောက်ရောက် မတုန့် ပြန်နိုင်ဘူး။ သမိုင်းလဲ မကျွမ်း၊ သိပ္ဗံလဲ မသိ ခက်ပါဘိ။ ယောတိ ယောရာ ယောင်ချာချာ။
ကျနော်လူတတ်ကြီး မဟုတ်ပေမည့် ဗိုလ်သိန်းစိန်ရဲ့လူတွေထက်တော့ ကိုယ်ကိုသာတယ်လို့ ယုံတယ်။ သေချာတာကတော့ ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့ မိန့် ခွန်းကို အငှားယူသုံးပြီး ..တိုင်းပြည်ကိုဘယ်လောက်ချစ်သလဲ အချိန်မရွေးပြိုင်ရဲတယ် ။ လူထုက ဆုံးဖြတ်မယ်ဆို သူတို့ ထဲက သီဟသူရဘွဲ့ ရတဲလူလဲလာခဲ့ပြိုင်ရဲတယ်။
ကျနော်စဉ်းစားတာလေးတွေ ချပြချင်ပါတယ် ။ လူအများပြောင်းရွှေ့ မှုကို နစ်ဖက်စဉ်းစားရပါတယ်။ PUSH PULL Factors..လူကို တွန်းထုတ်မှု နင့် ဆွဲငင်မှု အကြောင်းတရား ၂ မျိုးနဲ့ ချိန်ထိုးပါမယ်။ ကနေ့အာဖရိက လှေစီးတွေကိုလဲ သူတို့ ဒီလိုဘဲ ချင့်ချိန်ကြပါတယ်။
(၁) ဘင်္ဂလားဒေရှ့် ဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ လူဦးရေ အထူထပ်ဆုံးနိုင်ငံ။ တရားဝင် သန်းကောင်စာရင်း (နစ်၂၀ကျော်ခဲ့) စာရင်းက လူဦးရေ သန်း၁၅၂ -သန်း။ ခန့် မှန်းသူတွေက ၁၆၅ သန်း။ တိုင်းပြည်မှာ လူနေမရတဲ့ တောင်တန်းနဲ့ကျယ်ပြန်တဲ့ ဒီရေနွံတောဧရိယာသာထုတ်လိုက်လျင် လူနေထိုင်နိုင်တဲ့ ဧရိယာက သေးသေးလေးမှာ လူ သန်း၁၆၀ ပြွတ်သိပ်ကျပ်ညပ်နေတာက အဓိက PUSH ကအဓိကတွန်းအား။
(၂) အလုပ်အကိုင်းရှားပါးမှု။ နိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်မှု နင့် အဓိက နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်အမျိုးသမိးနစ်ဦး၏ တဦးအပေါ်တဦး မုန်းတီးမှုကြိးမားခြင်း ၊ ညစ်ပတ်တိုက်ခိုက်ပြီး နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြုပ်နှံသော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြိးများကိုပါတိုက်ခိုက်လာသည့်အထိ လွန်ကဲလာမှုက ရင်းနီးမည့်အလုပ်များကိုကန်ထုတ်နေမှုကလည်း အဓိက တွန်းမောင်းကန်အားဖြစ်နေပြန်သည်။
(၃) လူဦးရေများပြားလှသော်လည်း သားဆက်ခြားစီမံချက်ကိုပင်လက်မခံသော ဘာသာရေးယုံကြည်မှု( မကြာသောကာလကမှ ခွင့်ပြုခဲ့သည်) နှင့် ပညာမတတ်မှုကြောင့် ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နင့်အိမ်ထောင်ပြုမှုတို့ က ဗူးလေးရာ ဖရုံဆင့်။
ဆွဲအား PULL ကလည်းအားကောင်းနေပါတယ်။
(၁) UNHCR / Malaysia ၏မမျန်ကန်သောလုပ်ဆောင်နေမှု
မလေးရှားက UNHCR ကုလသမ္မဂဒုက္ခသည်မဟာမင်းကြိးရုံးက မလေးရှားရောက်လာတဲ့ ဘင်္ဂါလီအကုန်နီးပါးကို ၉၅ % အထက်ကို ဒုက္ခသည်အဖြစ်လက်မှတ်ကို လွယ်လွယ်ကူကူထုတ်ပေးတာက အဓိက ဆွဲငင်အားပါ ။ အဲဒီအထဲမှာ ပြည်တွင်းက ဗမာစကားဘဲတတ်ပြီး ဘင်္ဂါလီစကားမတတ်သော မြန်မာပြည်အလယ်ပိုင်း..အောက်ပိုင်း အရပ်ရပ်က မွတ်စလင်တွေပါ ရီုဟင်ဂျာကုန်ကြပါတယ်။
၂၀၀၅ ဖေဖေါ်ဝါရီလမှာ ကျနော်မလေးရှားရောက်ပြီး လကုန်ခါနီး ဒုက္ခသည်လျောက်တယ်။ ၂ - ကြိမ်တိတိ လျောက်တာ လက်မခံပါ ။ ကျနော့်မှာ အကျဉ်းဦးစီးက ထောင်ထွက်လက်မှတ်၊ နိုင်ငံတကာကြက်ခြေနီ ICRC ကထုတ်ပေးတဲ့ ထောင်ထွက်လက်မှတ် (နံပါတ်တွေပါတယ်) နှင့် ICRC ကထုတ်ပေးတဲ့ နိုင်ငံရေးနင့်ထောင်ကျထားသူဆိုတဲ့ ထောက်ခံချက်ကဒ်ပြား (နံပတ်ပါသည် ) ကိုတင်ပြလဲ ..ငါတို့လူသစ်လက်မခံသေးဘူးငြင်းပြီ; လိမ်လွှတ်တယ်။ နေ့ တိုင်းတရက်ကို လူသစ် ( မှတ်ပုံတင်အသစ် ) ၁၅ ကနေ ၂၅ ယောက်လူသစ်လက်ခံနေတာ ဘာသာပြန်လုပ်နေသူတွေဆီကနေ သိနေရပါတယ်။
ကျနော်တို့ ဆက်ဆံရတာက မလေးရှားကုလားမတွေဘဲ။ တတိယအကြိမ်ထပ်သွားတယ်။ ပိတ်ထားတယ်လိမ်ပြောတော့ ကျနော်က ဘာသာပြန်တွေဆီက နေ့စဉ်လူသစ် လက်ခံနေတယ်ထောက်တော့ ..တိုင်းရင်းသားတွေအလှဲ့၊ ဗမာတွေ မခေါ်သေးဘူးလိမ်ပြန်တယ်။
အဲဒီမှာ လုံခြုံရေးဝန်ထမ်း နီပေါက ကျနော့်ကို ဘာပြဿနာလဲမေးတယ် ။ ကျနော်က ကဒ်ပြားတွေထုတ်ပြ၊ ကုလားမလိမ်တာပြောပြတော့ သူ့ အထက်တာဝန်ခံလုံခြုံရေးကိုခေါ်ပေးတယ် ။
အဲဒီ နီပေါက ကျနော်တို့ ဒုက္ခသည်ရုံးရဲ့ခင်ဗျားလိုနိုင်ငံရေးအမှု ထိပ်ဆုံးဥိးစားပေး ဟုပြောပါတယ် ၊ အခုမဟုတ်တဲ့ လူလိမ်တွေကိုတော့ ဦးစားပေးနေတယ်။ တကယ်ပေးရမဲ့သူကျတော့ လိမ်ထုတ်နေတယ်ပြောပြီး ကျနော်ရဲ့ လက်မှတ်မိတ္တူတွေကို ပင်မရုံးကြိးဖက် ယူသွားတယ်။ မိနစ် ၂၀-လောက်နေတော့ သူပြန်လာတယ်။ ပြင်သစ်တယောက်လိုက်လာပြီး ကျနော့်ကိုတွေ့ တယ်။ ခနနေတော့ ဟိုကုလားမက အပြင်လူတွေကြားထဲမှာ ရာဇဝင်တွေကို လာမေးတယ်။ လူတွေကြားမှာ မေးခွင့်လုံးဝမရှိ။ နီပေါက လာကြည့်မှ ကျနော့်ကိုအထဲကိုခေါ်ပါတယ်။
နောက် ၁-ပတ်နေ လာခဲ့ရန်ရက်ချိန်းပေးတယ်။ မတ်လဆန်းပိုင်း ။ အဲဒီမှာ ပြင်သစ်တယောက်နဲ့ဖြေရတယ် ။ ပထမအဆင့် P- 1 ကဒ်ပြားထုတ်ပေးတယ် ။ နိုဝင်ဘာလ ၂၄ ရက်နေ့ ပြန်ချိန်းတယ် ။ တခါဖြေပြီးရင် တဆင့် တိုးပေးတယ် ။ အဆင့် ၆ ခုရှိတယ် ။ ၆ - ခုပြီးမှ RSD တတိယနိုင်ငံကို ခိုလှုံခွင့်အဆင့် သတ်မှတ်လက်မှတ် ( ကဒ်လေး ) ထုတ်ပေးပါတယ် ။ ထိုအဆင့်ရောက်ရန် ၂-နစ်မှ ၄ နစ်အထိကြာတတ်ပါတယ်။ (မှတ်ချက်- ထို ပထမအဆင့် ချိန်းလိုက်သော နိုဝင်ဘာလ ၂၄ ရက် မတိုင်မှီ နိုဝင်ဘာလ ၂၂ ရက်နေ့ မှာ ထွက်ခွာခွင့်ရခဲ့ပါသည်) ။
ထိုလက်မှတ်ရပြီးလျင်ပင် တတိယနိုင်ငံကိုထွက်ခွာခွင့်ရဖို့ က နောက်ထပ် ၂ နစ်ကနေ ၅ - နစ်လောက်ထပ်ကြာတတ်ပါတယ် ။ စုစုပေါင်း ၃-နစ်ကနေ ၅ နစ်အထက်ကြာတတ်ပါတယ် ။
ကုလသမ္မဂ ဗဟို၏စီမံချက်မှာ ကျနော်တို့ လိုနိုင်ငံရေးထောင်ထွက်တွေက ဦးစားပေးပါ ။ မပေးပါ။ လက်ကိုမခံပါ ။ ရိုဟင်၈ျာအမည်သာတပ်ပါ ၊ လိမ်ပြောပါ ၊ ထိုသူတွေဆို P-1 အဆင့်ကိုကျော် ၂ ခါလောက်မေးပြီးရင် တန်းပြီး RSD ထုတ်ပေးတော့တာ။
(၃) မလေးရှားအစိုးရ၏ မရိုးသားသော ဆွဲဆောင်မှု။
မလေးရှားအစိုးရကလဲ ယခင်က ထိုရိုဟင်ဂျာအမည်ခံသူများကို အမြဲတန်း နေထိုင်ခွင့်ရသူများ၏ အခွင့်အရေးနီးပါး ဦးစားပေးခဲ့ပါတယ်။ ရိုဟင်ဂျာပြဿနာကို ပိုမိုကြိးထွားလာစေရန်ရွယ်တာပါ။ ရိုဟင်ဂျာလက်မှတ်ကိုင်ထားသူတွေကို တရားဝင်အလုပ်လုပ်ခွင့် ၊ ကလေးကျောင်းထားခွင့်၊ ဆေးရုံမှာ ဆေးကုသခွင့်တွေ ပေးထားပါတယ် ။ ကျန်ဒုက္ခသည်တွေ အလုပ်လုပ်ခွင့်မရှိပါ။ ခိုးလုပ်နေရပါသည်။
ဒုက္ခသည်မင်းကြိးရုံးက ရိုဟင်ဂျာဆိုသူတွေကို တလလျင် ရင်းဂစ် ၁၅၀ ထောက်ပံ့မှုပေးပါတယ်။ တခြားဘယ်ဒုက္ခသည်မှ ထိအခွင့်အရေးမရပါ။ ၂၀၀၆ မေလက စတင်ပြီး ထိုထောက်ပံ့ငွေတွေကိုရပ်ဆိုင်းလိုက်ပါတယ် ။ ဇွန်လ ထဲမှာ ရိုဟင်ဂျာတွေက ထိုသို့ ရပ်ဆိုင်းမှုကို ကန့် ကွက်ဆန္ဒပြကြပါတယ်။
ယူအန် အရာရှိတွေက ဒါအခွင့် အရေးမဟုတ် ၊ ဦးစားပေးမှု ၊ အထူး အကူအညီသာဖြစ်ကြောင်း ရှင်းပြပါတယ်။ This is not your RIGHT, it is just the PRIVILEGE .လို့ ရှင်းပြပါတယ် ။ မရပါ။ ဇွန်လ ၁၂ ရက်နေ့ မှာ ရိုဟင်ဂျာဆိုူသူတွေ ယူအင်ရုံးကို ခဲတွေနဲ့ လာပေါက်လို့ရဲလုံခြုံရေး ခေါ်ယူရသည်အထိ ဖြစ်သွားပါတယ်။
ရိုဟင်ဂျာအရေး တောင်းဆိုနေသူတွေ ၊ သူတို့ က ဦးစားပေးသောကူညီမှုကို ရပ်တာတောင် ခဲနဲ့ လာထုတဲ့သူတွေပါ။ မလေးရှားအစိုးရကလည်း မူလကပေးထားသောအထူးအခွင့်အရေးတွေကို ရပ်ဆိုင်းလိုက်ရပါတယ်။
နောက်ပိုင်းက မြန်မာပြည်ကအလုပ်အကိုင်နဲ့ (ပတ်စ်ပို့ နင့်) ရောက်လာသူမွတ်စလင်များရော၊ အောက်လမ်းကလာသူမွတ်စလင်များကလည်း ရီုဟင်ဂျာဆိုပြီး ဒုက္ခသည် လိမ်လျှောက်ကြပါတယ်။
ဘုရာဖူးရင်း လိပ်ဥတူးရင်း။ အများစုက လိမ်လျောက်ကြတာဘဲ။ အရင်းမရှိ လှေထိုးလိုက်သလို ..ရိုဟင်ဂျာနေကြတာပါဘဲ။ နောက်ပိုင်း တတိယနိုင်ငံတွေက ရိုဟင်ဂျာဆိုသူတွေ လက်ခံမိပြီး လက်လန်ကုန်ကြပါတယ်။ ရိုဟင်ဂျာဆုိုတာနင့် ကိုလက်မခံတော့ပါဘူး။ အဲဒီမှာ ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည် လက်မှတ်ကိုင်ထားသူတွေ ရွာလည်တော့တာပါဘဲ ။ ဘယ်နို်င်ငံကမှ လက်မခံချင်ကြတော့ဘူး။
ပတ်စပို့ နင့် အလုပ်လာလုပ်သူ ဘင်္ဂလာဒေရှ့် နိုင်ငံသားတွေထဲကလည်း ရိုဟင်ဂျာလိမ်လျောက်သူတွေ တပုံကြိး။ နာမည်လိမ်တွေနှင့် ကျနော်ကိုယ်တိုင်ဆုံဖူးတာ အများကြိး။ အခုရိုဟင်ဂျာလက်မှတ် ကိုင်ဖူးသူ မြန်မာပြည်က ဗမာစကားတတ် ၊ ဘင်္ဂါလီစကားမတတ်ဘဲ ရိုဟင်ဂျာလိမ်လျောက်ခဲ့တဲ့ ပြည်မနေတဲ့ မွတ်စလင်တွေ မြန်မာပြည်ပြန်ကုန်ကြတာ မနည်းတော့ဘူး။ မလေးရှားမှာ ဒုက္ခသည်လက်မှတ်ကိုင် ရီုဟင်ဂျာ တသိန်းလောက်ရှိနေပါပြီ။ ဘယ်နို်င်ငံကမှ လက်မခံချင်သူတွေပါ။
မလေးရှားမှာ လတ်ပေးလျင် အကုန်နီးပါးလုပ်ပေးပါတယ် ။ လူယောက် ဗွီဇာလွန်ကာနေထိုင်လျင်လည်း ထိုလူက မလေးရှားကနေ မထွက်ဘဲ ၊ သူ့ ပတ်ပို့ မှာ အထွက်တုံး၊ အဝင်တုံး အကုန်ထုပေးပါတယ် ။ လူဝင်မှတ်တမ်းမှာပါ အဝင်အထွက်ပြပေးတဲ့အထိ လုပ်ပေးတဲ့နိုင်ငံပါ ။ ဒါလောက်ဆို သဘောပေါက်တော့ ။
အဲဒါကြောင့် လူမှောင်ခိုဂိုဏ်းတွေကိစ္စ လူအခွင့်အရေးအဖွဲ့ တွေက တင်ပြနေတာ ၂၀၀၄ ခုနစ်ကထည်းက့ပါ ။ အခု ထိုင်းမှာမိတော့မှ..။ အင်ဒိုနီးရှားမှာ ပေါ်ကုန်တော့မှ လူကြားကောင်းအောင်လုပ်နေတာပါ ။
အဓိက အကြောင်းရင်းက မလေးရှား ၊ ထိုင်းတို့ ကဒုစရိုက်ဂိုဏ်းတွေရပ်တည်ခွင့်ပေးထားတော့ လူမှောင်ခိုဂိုဏ်းတွေက လူကောင်းတွေကိုပါ အတင်းအကျပ်လူကုန်ကကူးနေတော့ ဘ၈င်္ါလီတွေကို ခေါ်တော့တာပါ ။
ဒါလဲ အင်မတန်အားကောင်းတဲ့ PULL factor ပါ။
မြန်မာအစိုးရ၏ တန်ပြန်လုပ်ဆောင်ရမည့် အရွေ့ ကွက်။
(၆) ရိုဟင်ဂျာလို့ လိမ်ညာနေတာကို ပါးစပ်ပိတ်ပစ်ရန် စီမံချက်။
အခု မြန်မာအစိုးရက ရိုဟင်ဂျာဆိုသူတွေကို ကုလသမ္မဂစားရိတ်နင့် DNA စစ်ပေးရန်တောင်းဆိုရပါမည် ။ ဒါဟာ့အလွန်ထိရောက်ပြီး အရေးကြိးတယ်ဆိုတာကို စစ်ရေးအမြင်ရှိတဲ့ သမတကြိးနင့် နိုင်ငံရေးအကြံပေးများ သိပါလေရဲ့ လားမသိဘူး ။
အစကတည်းက သမိုင်းမရှိတော့ ရိုဟင်ဂျာဆိုတာ အာရပ်သဘောင်္ပျက်လို့အာရပ်လူမျိုးက ဆင်းသက်လာသူတွေဆိုထားတော့...သဘောင်္က ရခိုင်ကမ်းကိုလာတင်တယ်။ ရခိုင်ဘုရင်က နေထိုင်ခွင့်ပေးတယ်။ လာတင်တာက အထီးတွေချည်းဘဲ။ အိမ်ထောင်ကျတယ်ဆိုလျင် ဒေသခံရခုိုင်မိန်းမနဲ့ ဘဲ ကျရမှာ။ တစတစ ရခိုင်သွေးက ပိုပိုများလာရမှာပါ။ တစတစ အာရပ်သွေးရော့နည်းသွားရာကနေ ပပျောက်သွားရမှာပါ ။
ကနေ့တခြားမကြည့်ပါနင့် ။ အာရပ်သဘောင်္ပျက်က လာတင်တာက ဆယ်ဂဏန်းပေါ့။ အချိန်ကလည်း လွန်ခဲ့တဲ့ နစ်တထောင်ဝန်းကျင် ။ သူတို့ နောက် အုံနဲ့ကျင်းနဲ့ရောက်လာတဲ့ အင်္ဂလိပ်နယ်ချဲ့ ။ မြန်မာအမျိုးသမီးတွေနဲ့အိမ်ထောင်ကျတာ အများကြိး။ အထက်စီးကနေ နေတယ်။ သူတို့ယဉ်ကျေးမှုကို မြန်မာပြည်မှာ ကောင်းစွာသွတ်သွင်းနိုင်ခဲ့တယ်။
ဘိုကျောင်းတွေ ၊ ဘိုစကားတွေ ထားရစ်နိုင်ခဲ့တယ်။ တိုင်းရင်းသားစာပေမှာ အင်္ဂလိပ်အက္ခရာတီထွင်မွေးစားနိုင်ခဲ့တယ်။ လူတွေက ဘိုတွေကို အားကျခဲ့ရတယ်။ နှစ်တရာကျော်အုပ်ချုပ်သွားတယ်။ ကပြားတွေ အများကြိးထွန်းကားခဲ့တယ်။
ကျနော်အဖေလည်း ကပြား၊ အင်္ဂလိပ်သွေး ၅၀% တဝက်ပါသူပါ။ အဖေကိုမွေးတာ ဒီနှစ်မှာ အနစ် (၁၀၀)တိတိပြည့်တယ်။ အဖေ့မျိုးဆက် ယခုအဖေကနေစတွက်လျင် ၄ -ဆက်မြောက် ရောက်ပြီ။ မြစ်တွေရပြီ။ အဖေကတော့ ဘိုရုပ်။ ကျနော်တို့ ကျတာ့ ဗမာမစစ်တာလောက်ဘဲ ပေါ်တော့တယ်။ ကျနော့်သား သမီးတွေ ဗမာမစစ်တာပေါ်သေးတယ်။ ကျနော့်မြေးတွေကျတော့ ဘိုရုပ် တစက်မှမရှိတော့။ အပြီးဗမာဘဲ။
ညီမောင် ဂျိုးရဲ့ မြေးတွေကျတော့ ဘိုသွေးပါတယ်တောင် မပြောရဲတော့ဘူး။ တူမတွေကမွေးတာတွေ ဘိုသွေးပါပါတယ်ပြောလျင် ဘယ်သူမှ လက်မခံနိုင်တော့တဲ့ ရုပ်ဖြစ်သွားပြီ။ ဘိုသွေးပြောလျင် ကောင်းကောင်းအဟားခံရပါမည်။
ဒါတောင် သင်္ချာနည်းအရ ထိုအဖေ၏မြစ်ဖြစ်သူတွေမှာ အင်္ဂလိပ်သွေးက ၆ % ( 6.0% ) ပါနေသေးသည်။
အဲဒီတော့ အနှစ် ၁၀၀ အရောက်မှာ ကျနော်တို့ က ဘိုမျိုးဆက်ပါ မပြောရဲတော့တာ..ကို အနှစ် ၁၀၀၀ လူတွေက အာရပ်မျိုးဆက်တွေပါ အော်နေတာ ပြောနေတာ..ချင့်ချိန်ကြည့်ကြပါ ။ သူတို့ သွေးထဲ အာရပ်သွေးပါလှ. ..( 0.0001 % )ဘဲကျန်တော့မည် ။ သူတို့ က အသက် ၉ နစ်ဆို လင်ယူကြရပြီဆိုတော့ အနစ် ၁၀၀ မှာ မျိုးဆက် ၈ ၊ ၁၀-ဆက် ဆက်လောက်ရောက်နေတာနော် ။ မျိုးဆက် ၈-ဆက်နင့်တွက်လျင်ပင် အနစ်၁၀၀ မှာတင် အာရပ်သွေးက ..( 0.75 % )။ 1-% ပင်မရှိတော့ပါ ။
အခု အဲဒီရိုဟင်ဂျာလို့ ကြွေးကျော်နေသူတွေကိုသာ DNA စစ်ဖို့ ခေါ်လိုက်ပါ။ အာရပ်သွေးမပေါလျင်၊ ရခိုင်သွေးမပါလျင် ဘင်္ဂလားပြန်ပို့ မည်ကိုလက်ခံပါမည်ဟု သဘောတူပါ သည်ဟုသာ လက်မှတ်ထိုးခိုင်းပါ။ သွေးစစ်မယ်ခေါ်လိုက်လျင်..ဘယ်အကောင်မှ ထွက်လာရဲမည် မဟုတ်တာကို ရဲရဲင်္ကြီး ကျနော်အာမခံပါတယ်။ သွေးစစ်လဲ ပြန်မပို့ လျှင်တော့ ..မတွေ့ လဲ ဘာအရှုံးရှိတာမှတ်လို့ငါးမရျရချိုးပြန်မည့်သူတွေ ထွက်လာပါဦးမည်။
အာရပ်သွေးနင့် ရခိုင်သွေး များများမပါလျင် ဘင်္ဂလာဒေရှ့် ပြန်ပို့ မည်ကို သဘောတူကြောင်းသာလက်မှတ်ထိုးခိုင်းလိုက်ပါ။ လာရဲသူမရှိစေရပါဘူး။
ရခိုင်ရှိ နိုင်ငံသားအဆက်များနင့် DNA တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးနိုင်ပါသည် ။ ကျနော်တို့ က အထက်စီးရမည့် အချက်ကို သမတအကြံပေးများ မမြင်ကြတာလား။ ပညာရှင်များနင့် တိုင်ပင်ကြစေလိုပါသည်။
DNA စစ်ရေးစကားဟလိုက်လျင် ထိုကုလသမ္မဂ မစ္စတာဘန် ပါးစပ်ပိတ်သွားပါမည်ဖြစ်ကြောင်း။ သူက ပညာရှင်ဘဲ ၊ ဒီစကားဟလိုက်လျင် သူတို့ ကစားကွက်ကုန်သွားပြီဆိုတာ တန်းသိတာပေါ့။
(၂) ဒုတိယအချက်အနေနင့် ထိုရိုဟင်ဂျာတွေကို နိုင်ငံရေး
ဒုက္ခသည် အသိအမှတ်ပြုနေတာကို ရပ်တန့် ထားပေးရန် တောင်းဆိုရပါမည်။
ဒုက္ခသည်အဖြစ်အသိအမှတ်ပြုလျင် ထိုအသိအမှတ်ပြုသူများ အဆုံးအထိ တာဝန်ယူရန်တောင်းဆိုရပါမည်။ ပါးစပ်ဖျားလှုပ်ရုံလေး သက်သက်ကိုရပ်တန့် ရန်တောင်းဆိုရပါမည်။
( ၃) ရိုဟင်ဂျာဆိုသူတွေ၏ အဖိုးအဖွားများ၏ မျိုးဆက်ကို DNA ဖြင့်ခြေရာကောက်ရန် စစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။ မျိုးဆက်ကို ထောက်ပြရန် မတောင်းဆိုနေသမျှ ဒီကုလိမ်တွေက ဆက်လိမ်နေဦးမည်သာ။
ဒုက္ခသည်မင်းကြိးရုံးက ရိုဟင်ဂျာများ၏ မြန်မာနိုင်ငံမှ ဇစ်မြစ်ကို စီစစ်ရန်တောင်းဆိုရပါမည်။ အများစုဟာ ဗြောင်လိမ် ၊ တွေ့ ကရာ..တခြားသူသင်ပေးတာတွေ အကုန် ထွက်ဆိုထားတာပါ ။ ယူအင်ရုံးမှာကို သူကိုယ်တိုင်ပထမ ထွက်ဆိုချက်ကို မေ့နေသူ မှားပြောနေသူတွေထုနဲ့ဒေးပါ။
ယူအန်ရုံးက စီစစ်လျှင် ပထမ လူတွေ့ တွေမှာသူတို့ ဘာတွေလိမ်ထားမိတယ်တောင် မမှတ်မိသူတွေ တဝက်ကျော်ရှိနေပါမယ် ဒါကိုရဲရဲကြိးဆုပ်ကိုင်ထားလို့ ရပါတယ်။
ကျနော်မြင်သလောက်ပါ၊ဆက်လက်စဉ်းစားပြီး ဆက်လက်တင်ပြနိုင်ရန် ကြိုးစားပါဦးမည်။
ရိုဟင်ဂျာလို့ လိမ်နေသူတွေကို လိမ်နေမှန်းသိသိကြိးနင့် ရပ်တည်ပေးမှုဟာ လူကြိးလူကောင်းများ မလုပ်သင့်ကြောင်း အစိုးရမှ ခပ်မာမာသတိပေးရန်။ ရိုဟင်ဂျာအလိမ်ပေါ် လာလျင် လူကြိးလူကောင်းပီပီ တာဝန်ရှိရှိ မှားကြောင်း ဝန်ခံပေးရန် တောင်းဆိုပြီး ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှုးချုပ်ကိုပါ စိန်ခေါ်လိုက်ပါရန်။
Wednesday, May 13, 2015 Myo Win No comments Posted in: internet
Thursday, April 09, 2015 ဒီမိုဝေယံ 1 comment Posted in: ကဗျာ
ပြည်သူတွေ သတိရှိကြပါ လုပ်ကြံဖန်တီး ဆန္ဒပြပွဲများနဲ...
စဈတပျက ယနေ့ ၁ ၊ ၂ ၊ ၂၀၂၁ မနကျပိုငျးမှာ လူထုခေါငျ...
ပြည်သူအများ သတိဝီရိယ ထားသွားလာကြပါရန်အင်တာနက် ပြတ်...